Oromo Demonstration The Hague (Den Haag) 11 12 2015
Oromoon biyya Belgium fi Nederlands bayyinan kan irrati hirmatan Hiriri Morimii Maaster Pilan fi labsii caafee Oromiya wayee Magaaloota Oromiya barna ba’ee morimii goodhamee biyaa Holland Magaala Den Haag (The Hauge) itti goodhamee. Haawwasii kun laman waree booda 13 kaase hanga 15-30 Ministera dhimma ala Nederlands, fi Paarlamaa biyyati fi Mana murti adunya ICC fula durati sagalee uumata Oromoo dhageesisa turan. Bareefama Qoophayees wajjiralee dhimmi isaa ilaalatuu kanati keenatan jiru.
Dhimma kana walqabsisun Gaafi fi deebi akkasumas Dhaamsa Dr. Getachew Jigi : Oromoo maraaf Muddee 13, 2015 link kana irra dhagefachuu dandesuu. https://www.youtube.com/watch?v=1lN8F8S26BM&feature=youtu.be
Hirira kana irrati TV OMN guyya gutuu bakka hirirati argamun gabasa gutuu warabun dabarsa keessa kan maxanfamee fi suura hirira kana murasaa akka kana gadiiti dhiyeesina.
https://www.youtube.com/watch?v=DcfO5k-_qkg vidio dhagefadha.
Haaluma wal fakatuun Hiriri Oromiyaa keessati egalamee jiru guyuma guyyan cimee iti fufa kan jiru yamuu ta'uu keesumati hirmanan dubartoota qinqisfama jira.
Dubartiin Oromoo nu jiradha, mee hirira barana bakka hundati dubartituu dura jira, jartoliin rasasa diina dura dhabadhen ijoole hambisa jeecha jiru. Yeeroo hunda dubartiin Oromoo dhiira caalti kan jeedhu xinixalii koo barana falamin ka'ee kana irrati ragga gudaa na argamsisee jira. Warqiitu fi Mastawatii Ogannota Walloo irra kasee hanga Asilii Oromooti yoo ilalee dubartiin Oromoo diinati harka latan hin beekan. Hirira barana irrati hirmana shamaran fi haadhooli olana dha. Jarsoolin Oromoo Jaartii mangudoo kana irra waa barachuu qabu, Dubartiin Oromoo yoomi ilee dhiira oromoo caalaa murannoo qabu. Jaarti Mangudoo kana dhageefadha Oromoon hundi Ijoolee keessan irrati akka Akkon Oromoo falmatuu kana falmadha.